Ubani phakathi kwethu ongakaze ngiphuphe kokuba yokugezela elikhulu elikhanyayo, okungcono nge window, alinikela umbono omuhle, ingaphakathi esanele sokuphumula, ukuphumula futhi aziphumulele. Kodwa, abehlela phansi "kusuka ezulwini kuya ephasini," amehlo akhe kuthwetshulwa imitha emithathu yokugezela efulethini ejwayelekile, siyaqaphela ukuthi iphupho iphupho, kodwa ngokoqobo lokho-ke, bese wakha indlu yangasese design usayizi encane enhle ukhululekile egumbini kunzima. Kunzima, kodwa kungenzeka. Kunezindlela okungenani ezimbili ukwandisa isikhala esincane yokugezela. Okokuqala - lokhu ezinjenge, uphinde amapayipi ukuze ngangokunokwenzeka ukuze wonge isikhala, futhi uma kungenzeka, ke inyunyana ekamelweni elilodwa yokugezela ehlukile. Esesibili - ukukhuphuka ezibukwayo emkhathini besebenzisa amasu design.
Indlela yokuqala - a kukhathaza futhi zibiza. Kodwa uma kungenzeka ukuze ayifeze, umphumela ungaba muhle kakhulu. Awukwazi ukwenza ezinjenge sina, bese uzama ukudala Umklamo yokugezela ekamelweni elincane usayizi kancane rearranging amapayipi ukuthi kungaba futhi ngempumelelo kakhulu. Ngokwesibonelo, kakhulu ilondoloza isikhala onesimo emincane imishini sanitary. Corner kubhavu, usinki, eshaweni kanye yangasese ukukhulula "zendabuko" endaweni yabo futhi ukuba ukwazi ukudala induduzo esikhaleni kulencane. Lena izihlambi kuyiqiniso ngokukhethekile. By endleleni, endlini yangasese ezincane kakhulu kungenziwa akusebenzi eyakhelwe ngigeza futhi ehlukile eshaweni ingilazi ukwahlukanisa ukuvikela lonke igumbi kusukela spray yamanzi wachela.
yethusi plastic amapayipi Modern ukuvumela amanzi ukuhlanza lonke uhlelo yokuxhumana odongeni, futhi kuyindlela engcono kakhulu kuthinta aesthetics egumbini, futhi ikuvumela ukuba bandise isikhala. kuphakama Inkinga eyinhloko yesikhuphukeli amapayipi, okumele simaskwe. Kodwa esikhundleni kocingo ibhokisi, zama ukuvala iphaneli zokuhlobisa akuyona kuphela isikhuphukeli, kodwa futhi flank ethoyilethi futhi kwephaneli ukwenza emashalofini esakhelwe izinto ezahlukene. Uma amapayipi kufihlwe odongeni kuhluleka, imishini amanzi supply nisitshekelwe ezinezikhoxe ongaphakeme, Amashalofu okubeka, okuyinto ukunciphisa Tile kanye ebusweni phezulu isetshenziswa njengoba ishalofu okugeza izesekeli.
Indlu yangasese design usayizi elincane egumbini. Umbala nokukhanya
ngezabelo Lungile egumbini futhi kwenze kube zibukeke ibe banzi kusiza Umbala izindonga, phansi nophahla. Kukhona jikelele zonke izindawo ezincane ngokuvamile - lemelula kakhulu kunaloko izindonga, kuya kuba kuningi isikhala, futhi okuphambene nalokho. Esikhathini yokugezela encane akukuhle ukusebenzisa isembozo kunodonga imibala emnyama kakhulu noma elikhanyayo, kanye umbala iphethini ezinkulu. White noma iyashintsha iyaphupha ibe ukukhanya imibala tile kungenziwa "buhlanjululwe" kukhona namabala amancane liqhakazile, kodwa lapho okuningi akufanele kube. Ingaphezulu ifenisha namathayili kungcono ukukhetha matte kanye nosayizi Tile, ngangokunokwenzeka.
Very interesting futhi amasu esimanje, ongaboni wenabisa isikhala, kuba ukusebenzisa yokugezela in the ingaphakathi udonga izithombe, esibonisa amathemba. Kungenzeka omnyama nomhlophe noma umbala isithombe, okuyinto usesikhundleni isikhala esikhulu odongeni khulula Ngokwesibonelo, eduze kubhavu.
Kumqoka kakhulu ezibukwayo ukunwetshwa isikhala inombolo nendawo ukukhanyisa zalapho. umklamo Ngibambeni yokugezela encane elisemhlanganweni hle deal e sikubeke amafomu ezincane ezilula. Kufanele sishiye elengayo luminaires ezinkulu, okwenza ukukhanya esakhelwe ngaphakathi. Kuhle kakhulu uyobheka ophahleni elikhanyayo, ngenxa zazifihlwa ngaphansi opaque iphaneli ukukhanyisa lwemidlalo. Zonke izindawo obusebenzayo kumele kahle ovuthayo, kodwa silinganisela ngendlela enengqondo. kunokukhanya okuningi khona egunjini elincane inika yi ezimbi.
Indlu yangasese design usayizi elincane egumbini. Ifenisha kanye nemishini
Isikhala encane kudinga ukuba acabangisise nomklamo walo ukuze yonke into kwakukhona lapho indawo, kanye nekamelo lokugezela Kwatholakala enhle, ukhululekile futhi zisebenza kahle. A amancane compact ukukhanya ifenisha uyobheka nenhle kakhulu futhi hhayi nzima. kuhambisana kahle kakhulu ikhabethe Ucingo namasheluvu, ukukhanya kanye Airy. ukusetshenziswa Maximum kufanele kube indawo ngaphansi echibini futhi usule phezu echibini.
Kuyaziwa ukuthi esibukweni kahle zibukeke wenabisa isikhala ezaziwayo. Indlu yangasese yingenxa izesekeli kubalulekile kakhulu, ngakho inani izibuko kanye nosayizi omkhulu abasakwazi kuthethelelwe.
Esikahle futhi amahle yokugezela design "Khrushchev" nezindawo zokuhlala encane ibangelwa imingcele ezintathu eziyinhloko - umbala, ukukhanya kanye ifomu. Uma ucabangela zonke isentimitha isikhala, enguziqu kakhulu ngokufakwa izinto ngobuciko usebenzisa inhlanganisela yemibala nokukhanya nokuklanywa, ongayifinyelela ubuhle esiphezulu nenduduzo.
Ladder eshaweni phansi ngaphansi tile: yini ukukhetha?
Ukukhwehlela kabuhlungu - ukugula okungathí sina. Indlela yokuphatha kulo?
Ihhotela Hane Sun 5 * Ihhotela (Side, Turkey): ukubuyekezwa, izincazelo kanye nokubuyekeza
Kuyasiza ukuthi banikele ngegazi?